अस्पतालमा शैया भरिभराउ, पेटीमा बिरामीको छटपटी : RajdhaniDaily.com
Home प्रमुख अस्पतालमा शैया भरिभराउ, पेटीमा बिरामीको छटपटी
काठमाडौं । केही दिनयता कोरोना संक्रमण दर दैनिक आठ हजारमाथि पुग्न थालेको छ । संक्रमित संख्या बढेसँगै मृत्यु दरसमेत बढ्ने क्रममा रहेको छ ।
देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालका शैया भरिभराउ अवस्थामा छन् । गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितले शैया नपाएर छटपटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अधिकांश सरकारी र निजी अस्पतालमा अक्सिजनसहित शैया अभाव खड्किएपछि गम्भीर संक्रमित मर्कामा परेका छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटरका संक्रमितलाई दैनिक १४ हजार लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्ने भए पनि अधिकांशले पाउन सकेका छैनन् ।
अस्पतालमा रेम्डेसिभिरसमेत चर्को अभाव छ । औषधि व्यवस्था विभागले रेम्डेसिभिर अभाव नभएको बताए पनि संक्रमितले सहज रूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शैया अभावपछि संक्रमितको पेटीमै उपचार थालिएको छ । उनीहरूलाई पेटीमा राखेर अक्सिजन दिने कार्य जारी छ ।
न रेम्डेसिभिर न अक्सिजन
–शनिबार थप ८ हजार ४ सय १८ मा संक्रमण, ५३ को मृत्यु
–संक्रमितका आफन्तको प्रश्न– सरकार कहाँ छ ?
वीर अस्पतालमा शनिबार उपचारका लागि पुगेका रौतहटका ३८ वर्षीय कोराना संक्रमित राजन शाह अस्पतालमा बेड नै नभएको बताउछन् । ‘अब कहाँ जाने होला ? अलमलमा छु,’ उनी भन्छन्, ‘खोइ, सरकार कहाँ छ र ?’
यद्यपि, सरकारले संक्रमित उपचार गर्न वीर र ट्रमा सेन्टर ‘कोभिड डेडिकेटेड’ अस्पताल बनाउने भएको छ । अधिकांश निजी अस्पतालले अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डर अभाव हुँदा उपचार प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको जनाएका छन् ।
ललितपुर जावलाखेलस्थित अल्का अस्पतालले कोरोना संक्रमित उपचारका लागि अक्सिजन अभाव र आपूर्तिमा समेत कठिनाइ उपन्न भएको जनाएको छ । अस्पताल अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार संक्रमितलाई ‘हाइफ्लो’मा दिनुपर्ने भएकाले अक्सिजन अभाव हुन थालेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले सरकारको ध्यान रोकथाममै रहेको दाबी गरे । ‘प्रत्येक मेडिकल कलेजमा २/२ सय शैया थप भएको छ,’ उनले भने, ‘बेड अभाव भने भएकै हो ।’
त्यस्तै, शनिबार देशभर थप ८ हजार ४ सय १८ मा संक्रमण देखिएको छ । कुलमध्ये हाल ८३ हजार ४ सय ९३ सक्रिय संक्रमित छन् ।
हाल, ३ सय ९८ संक्रमित क्वारेन्टाइनमा छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ३ सय ७० डिस्चार्ज भएका छन् । शनिबारै देशभर ५३ संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा शनिबार ३ हजार १ सय १३ मा संक्रमण पुष्टि भएको छ । थपिएका संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका २ हजार २ सय ७० छन् । ललितपुरमा ४ सय ६२ र भक्तपुरमा ३ सय ८१ संक्रमित थपिएका छन् ।
देशभर ७ सय ५८ आईसीयू र २ सय ३१ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । प्रदेश १ मा १ सय ४ आईसीयू र २० भेन्टिलेटरमा, प्रदेश २ मा ६३ आईसीयू र ३५ भेन्टिलेटरमा छन् । बाग्मती प्रदेशमा ३ सय ८६ आईसीयू र १ सय २० भेन्टिलेटरमा छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ६१ जना आईसीयू र १३ जना भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा ८२ जना आईसीयू र २० जना भेन्टिलेटर, कर्णालीमा ३३ जना आईसीयू र १० जना भेन्टिलेटर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९ जना आईसीयू र १३ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना उपचार हुने काठमाडौं उपत्यकाको अस्पतालमा ३ सय ४ जना संक्रमित आईसीयू र भेन्टिलेटरमा छन् । अहिले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो बढ्नेक्रम जारी छ ।
अस्पतालमा शैया भरिभराउ
पेटीमा बिरामीको छटपटी
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - February 29, 2020 0
Exclusive प्रशान्त वली - October 2, 2020 0
Exclusive प्रशान्त वली - September 19, 2020 0
भर्खरै प्रशान्त वली - September 11, 2020 0
Editor-Picks प्रशान्त वली - October 7, 2020 0
अर्थ प्रशान्त वली - March 6, 2020 0
Editor-Picks प्रशान्त वली - March 23, 2020 0